FALASTIIN: Hanjabaaddii Netanyahu oo soo dhawaatay iyo xaaladda oo cakiran - Calanka.com
Wararka ka imaanaya daanta galbeed ee dhulka Falastiin ayaa waxaa ay sheegayaan in ay socdaan abaabullo looga hortagayo hanjabaaddii ra`iisal wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu kaas oo horay u sheegay in uu dhul ka xoogi doono Falastiiniyiinta 1 bisha Luulyo oo ay maalmo uun ka harsan tahay.
Qorshaha Netanyahu ayaa in in boqolkiiba 30% dhulka Falastiiniyiinta ee daanta galbeed uu kusoo dari doono Israel, waxaana dhulkaasi ku jira deegaanka barwaaqeysan ee loo yaqaan “Jordan Valley”.
Magaalada Ramallah ayaa waxaa iminka ka soconaya abaabul ku aadan sidii looga hortagi lahaa boobka Israel oo ay kula safan yihiin Mareykanka iyo dowlado kale, waxaana laga cabsi qabaa in maalintaasi ay dhacaan iska-hor-imaadyo dhiig badani ku daato kuwaas oo u dhexeeya ciidamada Israel iyo shacabka reer falastiin.
Xaaladda ayaa u muuqata mid cakiran, waxaa ay falastiiniyiinta ugu baaqayaan in ay cadaadis saaraan Israel.
Maamulka falastiiniyiinta ee daanta galbeed PLO ayaa horay ugu dhawaaqay in ay xiriiirka iyo heshiisyadii ay la galeen Israel ay laaleen islamarkaana xaaladdu ay iminka taagan tahay halkii ay taagneyd 1993-dii.
Madaxweynaha Falastiin Mahmoud Abbas ayaa shaaca ka qaaday in xukuumaddiisu ay ka baxday dhammaan heshiisyadii ay la gashay Mareykanka iyo Isreal, sababo la xiriira qorshaha ay Israel damacsantahay in ay ku qabsato kuna deegaameyso deegaanno hor leh oo ay Falastiiniyiintu leeyihiin.
Qorshahan cusub ee ay Israel damacsantahay ayaa dhigaya in boqolkiiba 60 ay ku qabsato deegaanada daanta galbeed islamarkaana ay ku deegaameyso.
” Laga bilaabo maanta, waxaa ay xukuumadda Falastiin iyo xisbiga PLO uu ka laabanaa dhammaan wixii heshiis ah ee ay la galeen dowladaha Mareykanka iyo Israel”, sidaa waxaa lagu yiri war kasoo baxay xukuumadda oo laga siidaayay wakaaladda warar Falastiin ee Wafa.
Mareykanka iyo Israel ayaa si wada jir ah u dajiyay qorshahan lagu qabsanayo dhulka reer Falastiin, waana qorshihii loogu magac daray “Trump’s Plan for the Middle East“.
Maxadweyne Cabbaas ayaa sheegay in Mareykanka iyo Israel ay dusha u ridan doonaan masuuliyadda cawaaqibka ka dhasha qorshahan lagu “boobayo” dhulka reer Falastiin.
US: Askarigii dilay ninka madow ee George Floyd oo dacwad cusub lagu soo oogay
Mareykanka oo 24-saac gudeheeda ay 2108 ruux ugu geeriyoodeen cudurka coronavirus